रणवीरका साथी भोलाराज: 'बलिउडमा टिक्न गाह्रो छ' (Bholika lagi)
२०६८ साल फागुनको महिना । बलिउडमा कार्यरत प्रशान्त रसाइलीले नाटकमा राम्रो छाप बनाउन सफल कलाकार भोलाराज सापकोटालाई एउटा मौका सुनाए, 'बलिउड चलचित्र 'बर्फी'मा एउटा पात्रको खोजी भइरहेको छ । अडिसन देऊ । छनोट भयौ भने राम्रो हुन्छ ।'
यो मौका सुनेपछि भोलाराजले केही साथीहरूसँग सल्लाह लिए । कसैले 'जा' भने, कसैले 'आकाशको फल...' भन्दै उडाए ।
भोलाराजले सुनिल पोखरेललाई सोधे । सुनिलले भने, 'यस्तो मौका नगुमाऊ ।'
भोलाराजले सल्लाह लिइरहने अर्का व्यक्ति थिए, उज्ज्वल । उनले पनि भोलाराजलाई यस्तो मौका नगुमाउन सुझाए । उज्ज्वलले भनेका थिए, 'अलिकति पैसा खर्च हुने हो । भयो भने त तिम्रो लागि ठूलो प्लेटफर्म मिल्नेछ ।'
भोलाराज विवाहको तयारीमा थिए । विवाह गरेको पर्सिपल्ट नै अडिसन दिन जानुपर्ने थियो । त्यसैले उनले आफ्नो हुनेवाला श्रीमतीसँग पनि अनुमति लिए । श्रीमतीबाट पनि अनुमति पाएपछि भोलाराजलाई रोक्ने को नै भयो र ?
दुलही भित्र्याएको पर्सिपल्ट नै उनी कलकत्ता पुगे । अडिसन दिए र फर्किए ।
अडिसन दिएर फर्किंदासम्म पनि भोलाराजलाई आफू छनोट हुन्छु भन्ने लागेकै थिएन । आफ्नो नम्बर र मेल आईडी दिएर उनी नेपाल फर्किएका थिए ।
नेपाल आएको १ महिनापछि भोलाराजलाई दोस्रो अडिसनका लागि बोलाइयो । मनमा केही आशा बोकेर भोलाराज मुम्बई पुगे ।
दोस्रो अडिसन दिनलाई भोलाराजसँगै अन्य तीन कलाकार पनि त्यहाँ पुगेका थिए । अन्य कलाकारहरूले गरिरहेको अभ्यास देखेर भोलाराजले आस मारे, 'उहाँहरू यस्तो मिहिनेत गरिरहनुभएको छ, मेरो त के होला र !'
भोलाराजले दोस्रो अडिसन दिए । अडिसनपछि क्यामेरा लुक्स हेरियो । अनि कपाल काट्न लगियो । भोलाराज सम्झिन्छन्, 'मेरो कपाल निकै लामो थियो । कपाल काट्न नै लागेपछि छनोट भएँ कि भन्ने लागेको थियो ।'
आखिर भोलाराज नै छनोटमा परे ।
अडिसन दिँदा भोलाराजलाई आफ्नो को-एक्टरबारे पत्तै थिएन । कपाल काटेको समयमा उनले रणवीर कपुर मुख्य कलाकार भन्नेसम्म सुनेका थिए ।
सुटिङ सुरु हुने पहिलो दिन बिहान । भोलाराजले रणवीरलाई भेटे । परिचय गरे । सँगै चिया पिए ।
छायाङ्कन सुरु भयो । सिन थियो- सुतिरहेकी हिरोइनलाई रणवीर र भोलाराजले कुर्नुपर्ने ।
छायाङ्कन सकियो । तर, भोलाराजले त्यो सुतिरहेकी हिरोइन को थिइन् भन्ने पत्तै पाएनन् ।
उक्त दिनको छायाङ्कन सकेर होटल फर्किएपछि भोलाराजले प्रियङ्का चोपडालाई देखे, 'हँ, यहाँ प्रियङ्का कहाँबाट आइन् ?' प्रोडक्सनलाई सोधेपछि बल्ल भोलाराजले पत्तो पाए कि चलचित्रको मुख्य अभिनेत्री नै प्रियङ्का चोपडा हुन् ।
भोलाराज भन्छन्, 'प्रियङ्कासँग सिन दिइसकेको रहेछु । तर, मलाई उनी नै हाम्रो अभिनेत्री हुन् भन्ने पत्तै थिएन ।'
सुटिङको अर्को रमाइलो किस्सा पनि छ । जब सुटिङ सुरु भयो, भोलाराजलाई पिसाबले नराम्ररी च्यापिरह्यो । छिनछिनमै पिसाब लागिरहने ।
'डरले पनि हो कि, मलाई त पिसाब आइरह्यो', भोलाराज सम्झिन्छन्, 'पहिलो सिन ओके नहुञ्जेल म धेरै पटक नै ट्वाइलेट पुगेँ ।'
पहिलो सिन ओके भएपछि भने भोलाराजलाई काम गर्न खासै गाह्रो भएन । उनी भन्छन्, 'भाषागत केही समस्या भयो होला तर, सिनमा समस्या भएन ।'
'बर्फी' रिलिज भयो । चलचित्र रिलिजपश्चात् भोलाराजको काम धेरैले रुचाए । बलिउडमा मात्र होइन, विभिन्न देशमा भोलाराजको चर्चा चल्यो ।
चलचित्र हिट भएपछि धेरैले भोलाराजलाई मुम्बईमा नै बस्न सुझाए । तर, मुम्बईमा बस्न सजिलो कहाँ थियो र ?
'एक जना म्यानेजर, फ्ल्याट र गाडी नभए त त्यहाँ आफूलाई बिकाउन नै गाह्रो हुन्थ्यो', भोलाराज भन्छन्, 'मैले त्यो अफोर्ड गर्न सक्छुजस्तो लागेन र नेपाल नै फर्किएँ ।'
बर्फीको छायाङ्कनमा रणवीर र भोलाराजबीच राम्रो सम्बन्ध बनिसकेको थियो । रणवीरले पनि भोलाराजलाई मुम्बईमा नै बस्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'तिम्रो सबै काम मेरै म्यानेजरले हेर्दिन्छ । एउटा फ्ल्याट र गाडी लिनू, भइहाल्छ ।'
तर, त्यो आँट पनि भोलाराजले गर्न सकेनन् । अन्तत: उनी नेपाल नै फर्किए ।
नेपाल आएपछि पनि भोलाराजलाई केही बलिउड चलचित्रबाट कुरा नआएका होइनन् । तर, कुरा आएका कुनै पनि चलचित्रबाट उनलाई फलाेअप भएन ।
भोलाराजलाई अझै बलिउडमा काम गर्ने रहर छँदै छ । केही चलचित्रका लागि कुरा पनि भइरहेका छन् । तर, उनले बुझेका छन्, 'सोचेझैँ बलिउड रै'नछ ।'
'बर्फी'ले जगाइदियो चलचित्रको भोक
नाटकमा लामो समय बिताएका भोलाराजलाई चलचित्रमा कुनै रुचि नै थिएन । उनी नाटकमा नै रमाइरहेका थिए । अफर आएका चलचित्रहरू लत्याउँदै आएका थिए ।
जब बर्फीमा भोलाराजले काम गरे, तब उनमा चलचित्रको भोक जाग्यो । त्यसपछि बल्ल उनले नेपाली चलचित्रमा पनि काम गर्ने सोच बनाए ।
तर, भोलाराजसम्म अफर ल्याउने कोही भएन । त्यसको कारण थियो, 'यो त बलिउडमा काम गरेको मान्छे, महँगो छ होला ।'
निर्मातालाई कोही तेस्रो व्यक्तिले पनि भोलाराजको विषयमा यस्तै खबर सुनाइदिन्थे । जसका कारण निर्माताले भोलाराजसम्म आउने आँट नै गरेनन् ।
भोलाराज भन्छन्, 'केही समय मलाई चलचित्रको अफर आएन । किन आएन भन्ने बुझ्दा पो तेस्रो व्यक्तिले हल्ला फिँजाएको पत्तो पाएँ ।'
भोलाराजले अहिलेसम्म १ दर्जनभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् । तर, उनी आफ्नै कामबाट भने सन्तुष्ट छैनन् । 'चलचित्रमा हामी फरक-फरक भूमिका चाहन्छौँ । चुनौती चाहन्छौँ', भोलाराज भन्छन्, 'नेपाली चलचित्रमा मैले त्यो चुनौती लिनुपर्ने भूमिका नै गर्न पाएको छैन ।'
अहिले पनि भोलाराज आफूले काम गरेको चलचित्र सम्झिनुपर्दा बर्फीलाई नै सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, 'बर्फीपछि सम्झनलायक काम गर्नै पाएको छैन । मलाई त्यो बर्फीलाई बिर्साउने काम गर्न मन छ ।'
अनि सुरु भयो कलाकारिता
हेटौँडामा जन्मिएका भोलाराजको सपना थियो- कवि बन्ने, गायक बन्ने, पत्रकार बन्ने ।
तर, भोलाराज आफ्नो सपनाभन्दा फरक पेसामा आइपुगे । त्यसैमा आफ्नो नाम बनाए, दाम कमाए ।
भोलाराज पढ्ने विद्यालयमा साँस्कृतिक कार्यक्रम भइरहन्थ्यो । गाउने, नाच्नेसँगै नाटक पनि देखाइन्थ्यो । भोलाराज कविता सुनाउँथे । कहिलेकाहीँ नाटकमा पनि सहभागी हुन्थे । २०५० सालमा भोलाराजले पहिलो नाटकमा काम गरेका थिए ।
विद्यालयस्तरमा पढ्दा नै भोलाराजले विभिन्न सडक नाटकमा काम गर्ने मौका पाए । एनजीओ/आईएनजीओले गर्ने विभिन्न सडक नाटकमा भोलाराज सहभागी हुन्थे । नाटक गर्दा पैसा पनि पाइने भएकाले भोलाराज यसैमा रमाउन थाले ।
नाटक देखाउन विभिन्न ठाउँ पुग्दा त्यहाँ उपस्थित हुने भीड र दर्शकले दिने तालीले भोलाराजलाई नाटकमा झनै मोह बढाइदियो । भोलाराज ठट्याैली गर्छन्, 'त्यही दर्शकको भीड र तालीले नै मलाई नाटकमा फसाइदियो ।'
भोलाराज हेटौँडामा सेलिब्रेटी नै भइसकेका थिए । उनले राम्रो परिचय बनाइसकेका थिए ।
एक दिन सँगै नाटक गर्ने साथी सहदेव पौडेल नाटक सिक्न भनेर काठमाडौं छिरे । भोलाराजले सहदेवलाई गिज्याए, 'नाटक पनि सिक्ने कुरा हो र ? नाटक त गर्ने हो गर्ने ।' सहदेवले भोलाराजको कुरा सुनेनन् र काठमाडौं आए ।
केही समय नाचघरमा नाटक सिकेपछि सहदेव हेटौँडा फर्किए । आफूले सिकेको कुरा भोलाराजलाई सुनाए । बल्ल भोलाराज जिल परे, 'ए ! नाटक त सिक्नैपर्ने रहेछ ।'
काठमाडौं आएपछि भोलाराजले राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक सिक्न थाले ।
काठमाडौं आएर पढ्न थालेपछि भोलाराजलाई आफूले नाटक नै नबुझेको झैँ लाग्यो । भोलाराज भन्छन्, 'हामी नाटक त गर्थ्याैं, तर त्यसको लजिक हामीलाई केही पत्तै हुन्न थियो । हरेक नाटक वा अभिनयमा लजिक हुने रहेछ ।'
नाचघरको एकवर्षे पढाइ सकेपछि भोलाराज आरोहण टिमसँग आवद्ध भएर लामो समय काम गरे ।
२०५७ सालतिरको समय । भोलाराज नाट्यक्षेत्रसँग दिक्क थिए ।
उक्त समय भोलाराजलाई खान-लगाउन नै समस्या परेको थियो । त्यसैले पनि भोलाराज दिक्क थिए ।
भोलाराज सम्झिन्छन्, 'त्यो समय काम पनि पाइएन । पैसा पनि भएन । खान पनि गाह्रो हुने अवस्था आएको थियो । त्यो समय भने नाट्यक्षेत्रसँग दिक्क भएको थिएँ ।'
भोलाराजसँगै काम गरेका केही साथीहरू विदेश गए, राम्रो पैसा कमाए । काठमाडौंमा घर-गाडी नै किने भन्ने कुरा सुन्दा भोलाराजलाई झनै तनाव हुन्थ्यो ।
अन्तत: भोलाराज काठमाडौंमा टिक्न सकेनन् र हेटौँडा फर्किए ।
हेटौँडा पुगेको केही दिनमा नै भोलाराजलाई कामको अफर आयो । 'प्लान नेपाल'द्वारा हुन लागेको सडक नाटकमा ट्रेनरको रूपमा भोलाराजलाई अफर गरियो । भोलाराजले पनि उक्त अफर स्वीकारे ।
केही समय भोलाराजले सिकाए । तर, उनलाई त्यहाँ सन्तुष्टि मिलेन । उनलाई अभिनय गर्ने भोक जागिरह्यो । उनी भन्छन्, 'अभिनयमा जस्तो सन्तुष्टि सिकाउँदा भएन । त्यसैले मलाई त्यहाँ रहेर काम गर्ने रहर लामो समय टिकेन ।'
ठीक सोही समय काठमाडौंमा गुरुकुल सुरु भयो । भोलाराज पनि गुरुकुलमा जोडिए । उक्त समयपश्चात् भोलाराज निरन्तर नाटक कर्ममा सक्रिय रहे ।
भोलाराजले अहिलेसम्म ३ सयभन्दा बढी नाटकमा काम गरेका छन् । उनले नाटकमा अभिनय मात्र होइन, केही नाटक निर्देशन पनि गरिसकेका छन् ।
भोलाराज आफ्नो एउटै रहर सुनाउँछन्, 'बाँचुञ्जेल नाटक गर्न पाऊँ ।'
दिप्सन लुइटेल Writer